Mkpu Mkpesa Metrobus! | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulMkpu Mkpesa Metrobus!
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metrobus, Turkey 0
ahịrị metrobus na-enye mkpu
A chụpụrụ ịdị ukwuu nke larịị metrobus, ọbara njem nke ụgbọ njem na Istanbul ka a ga-atụgharị uche na Mgbakọ Metrotù Na-ahụ Maka Obodo nke Istanbul. Mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị njem na-eji Altunizade kwụsịtụrụ.
SözcüDabere na akụkọ banyere Ozlem Guvemli'nin; Lụrụ metrobus ahịrị na-ebu ọtụtụ nde ndị njem n'etiti kọntinenti abụọ na Istanbul na-adọrọ uche. IMM Mgbakọ GOOD Party Group SözcüOnye otu nke thegbọ njem na okporo ụzọ. Suat Sari, n'okwu ya kwụsịrị burukwa; ọbụlagodi 545 metrobus, na-egosi na ndụ nka na ụzụ na akụ na ụba nke ugbo ala nke na-emeghị ka ọ pụta ìhè ọdịda na-aga n'ihu.
27 PHILEAS ROTES W WEREHOUSE
Linebus maka 1.2 nde euro nke ha na ikike nke 258 ndị njem Phileas akara ụgbọ ala, na-egosi na afọ 12. Yellow, 50 metrobus 27'nin na-emebi emebi n'ụlọ nkwakọba ihe n'ihi nsogbu ọrụ aka, o kwuru. Dika ihe nchoputa nke Sarı, ikike nke ndi njem nke 165 ikike karie ikike nke 400 puku euro eruola afọ nke 12, otu n'ime ha 400 puku Euro ugbo ala nke ika ahurula ndi njem njem maka 7.
AKA NA-EKWESIN EGO EGO
Okwusi ike na enweghi ike idozi ugbo ala ndia oge n'ihi ugbo agha na ano. Suat Sari, ihe kachasị akpata ihe mberede na oge ikpeazu edepụtara dị ka ndị a:
- Ndị ọkwọ ụgbọala na ụgbọ ala ole na ole. Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na-agba awa 10.5 kwa ụbọchị. Ọgụ kpatara oke ike n'etiti ndị njem na-emetụtakwa ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ọgụgụ isi. Ha niile kwesiri ịhazigharị ndị ọkachamara n'ihe gbasara akụnụba.
- Ndị na-anya ụgbọ ala BRT pere mpe. 100-200 kwesiri ka etinye ya na onye ọkwọ ụgbọ ala ọhụụ. Gbọ ndị ahụ dịkwa nsogbu. Ejiri taya talenti Metrobus. Usesgbọ ala ndị rutere na njedebe nke ndụ akụnụba ha na-awụpụ mmanụ na mmejọ mmezi. Mgbapụta mmanụ n'okporo ụzọ bụ ihe kpatara ihe mberede. Brokenzọ okporo ụzọ gbajiri agbaji. Akuko ihe ọghọm nke onye ọkachamara rụtụrụ aka na nsogbu 15 nwere nsogbu.
Dr. Yellow, akara metrobus site na imetụ ihe ndị aga-aga n'okporo ụzọ ụgbọ oloko, nkwụsị etiti na njem Marmaray na-aga maka ịhazi, kwuru na a ga-eburu ugboala metrobus ọhụrụ ahụ.
NKWUKWU EGO NA-EGO NA ALTUNİZADE
CHP Group SözcüSu Tariq Balyal nyekwara ihe nlere di egwu site na ikowa isi okwu a:
- Enwere mmụba nke njem nke 2018 n'ahịrị Metrobus ma e jiri ya tụnyere 2019 na 4. Enwere ọnọdụ pụrụ iche na Altunizade. 2018 na 2019 na 9 ahụtawo mmụba nke njem nke pasent 37,4 n'ọnwa. Anyị na-eche mmụba pụrụ iche.
- Enwere mmụba nke 66.4 na July, 45.7 na August na 40.9 na Septemba. Ndị njem njem nke 2018 nde 9 jiri ọdụ a na ọnwa mbụ nke 5 nke 533, ebe nde 2019 nde 7 puku ndị njem jiri ọdụ ahụ rụọ ọrụ na ọnwa itoolu nke 557. Mee elu karịa pasent 37,4.
- Mgbe ị na-echepụta ụzọ ụgbọ oloko Çekmeköy-Sancaktepe, enweghị atụmatụ dịka ọdụ Altunizade si dị, ya mere oke njupụta pụtara.
Akụkọ ihe mere eme nke TCDD Karşıyaka Leases Station Leases
ERC GmbH, Great Okporo ígwè Freight ka Turkey ...
Israel, Donald na Wailing Wall Train Station
CHP Izmir osote Balbay Gọọmentị si Izmir 10…